လီယွန်နယ် မက်ဆီ ဟာ အကောင်းဆုံး ဆုနဲ့ ထိုက်တန်ခဲ့ရဲ့လား . . . - SPORTS MYANMAR
လီယွန်နယ် မက်ဆီ ဟာ အကောင်းဆုံး ဆုနဲ့ ထိုက်တန်ခဲ့ရဲ့လား . . .
ဖီဖာ ရဲ့ တစ်နှစ်တာ အကောင်းဆုံး ဆုပေး ပွဲ အခမ်း အနား ကတော့ ယမန်နေ့ က ပြုလုပ် ပြီးစီး သွားခဲ့ ပါပြီ ။ အကောင်းဆုံး သွင်းဂိုး ဆု ၊ နည်းပြ ဆု ၊ အမျိုး သမီး ကစား သမား ဆုတွေ ကို ပေးအပ် အပြီး မှာတော့ အားလုံး စိတ်ဝင် စား ကြတဲ့ အကောင်းဆုံး အမျိုးသား ကစား သမား ဆု ကို ရောက်လာ ခဲ့ ပါတယ် ။ ဆုပေး ပွဲ မတိုင်ခင် မှာ လီဗာပူး ခံစစ်မှုး ဗန်ဒိုက် က ရေပန်းစား ခဲ့ ပေမယ့် တကယ်တန်း ကြေငြာချိန် မှာတော့ ဒုတိယ ရေပန်း အစားဆုံး ဖြစ်တဲ့ ဘာစီလိုနာ တိုက်စစ်မှုး မက်ဆီ က ဆွတ်ခူး ရရှိသွားခဲ့ ပါတယ် ။
မဲ ရလဒ် တွေ ကို ထုတ်ပြန်ချိန် မှာတော့ မက်ဆီ ဟာ ဗန်ဒိုက် ကို ၈ မှတ် အသာ နဲ့ ကျော်ဖြတ် နိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး အာဂျင်တိုင်းသား အတွက် ပထမဆုံး FIFA The Best Award ဖြစ်စေ ခဲ့ ပါတယ် ။ ဆုပေးပွဲ အပြီး မှာတော့ ဒီဆု ကို မက်ဆီ ရသင့်တယ် ၊ ဗန်ဒိုက် ရသင့်တယ် ဆိုတဲ့ သုံးသပ်မှု တွေ အသီးသီး ပေါ်ထွက် လာခဲ့ ပါတော့ တယ် ။
ဒီ ဆု ကို မက်ဆီ တကယ်ပဲ ရသင့် သလား . . . ။ စာရေးသူ အမြင် ကို ပြောရရင်တော့ ရသင့်တယ် လို့ ပြောနိုင် သလို မရသင့်ဘူး လုိ့လည်း ပြောလုိ့ ရနေ ပြန်ပါတယ် ။ တစ်ဖက်ဖက် ကို မဖြစ်မနေ ရွေးပါ ဆိုရင်တော့ ရသင့်တယ် လုိ့ပဲ ဆိုရမှာပါ ။
ဒါတွေကို ငြင်းခုန်ဖို့ အတွက် ပြီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံး ရာသီ ကို ပြန်သွား ကြရအောင် . . . ။ မက်ဆီ ဟာ မနှစ် က ဘောလုံး ရာသီ တစ်လျောက် လုံး စပိန် လာလီဂါ မှာ ရော ဥရောပ ချန်ပီယံ လိဂ် မှာပါ ခြေစွမ်းပြ နိုင် ခဲ့ ပါတယ် ။ ချန်ပီယံ လိဂ် မှာ ဆိုရင် အပတ်စဉ် အကောင်းဆုံး ကစား သမား ဆုကို မက်ဆီ ၊ မက်ဆီ ၊ မက်ဆီ ၊ မက်ဆီ ကပဲ ရခဲ့တာပါ ။ မက်ဆီ ခြေမပေါ် ခဲ့တာက တစ်ပွဲ သာ ရှိခဲ့ပြီး အဲ့ဒီ တစ်ပွဲ က ပဲ မက်ဆီ ကို ရော ဘာစီလိုနာ ကို ပါ ပေးဆပ်မှု ကြီးမား စေခဲ့ တာပါ ။
အသင်း လိုက် အောင်မြင်မှု မှာတော့ မက်ဆီ ရဲ့ လာလီဂါ ချန်ပီယံ ဆု ဟာ ဗန်ဒိုက် ရဲ့ ချန်ပီယံ လိဂ် ကို မယှဉ် နိုင် ပါဘူး ။ နိုင်ငံ အသင်း ဘက်ကို ပြန်ကြည့်ရင် လည်း မက်ဆီ ဟာ ကိုပါ အမေရိက မှာ ရှုံးထွက် အဆင့် ကို သာ ရောက်ခဲ့ ပြီး ဗန်ဒိုက် ကတော့ ဥရောပ နေးရှင်းလိဂ် မှာ ဒုတိယ ရခဲ့ ပါတယ် ။ ကိုပါ မှာ ဗိုလ်စွဲ ခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံ လိဂ် ချန်ပီယံ လီဗာပူး အသင်းသား တွေ လည်း ရှိနေ ပြန်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် အသင်းလိုက် အောင်မြင်မှု မှာတော့ မက်ဆီ က ပြိုင်ဘက် တွေ ထက် အမှတ် နည်းနေခဲ့ ပါတယ် ။
တစ်ဦးချင်း အရည် အသွေး ကို နှိုင်းယှဉ် တဲ့ အခါ မှာလည်း မက်ဆီ ဟာ ဗန်ဒိုက် နဲ့ သူမသာ ကိုယ်မသာ အနေ အထား မှာသာ ရှိခဲ့ ပါတယ် ။ မက်ဆီ က ရွှေဖိနပ်တွေ အများကြီး ယူထားတယ် ဆိုပေမယ့် ဒါဟာ ရိုနယ်ဒို ၊ မာနေး ၊ ဆာလာ တုိ့ လို တိက်စစ် သမားတွေ အပေါ် မှာသာ အားသာချက် ဖြစ်စေနိုင် ပါတယ် ။
ဗန်ဒိုက် ကတော့ ခံစစ် သမား တစ်ယောက် ဖြစ်နေတာ ကြောင့် မက်ဆီ ရဲ့ သွင်းဂိုးတွေ က ဗန်ဒိုက် အပေါ် အသာ ရနိုင် မှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ ဗန်ဒိုက် ဟာ မက်ဆီ လို ဂိုးတွေ မသွင်းနိုင် ခဲ့သလို မက်ဆီ က လည်း ဗန်ဒိုက် လို ခံစစ် ကြောင်း ကို ဦးဆောင် ပေးနိုင်တာမျိုး မလုပ် နိုင်ခဲ့ ပါဘူး ။ စကားကို ကပ်ပြီး ပြောကြကြေး ဆိုရင် ဗန်ဒိုက် ကတောင် ရှေ့တက် ဂိုးသွင်း ပေးခဲ့ပြီး မက်ဆီက နောက်တန်း ကို ဆင်းဖျက်တာမျိုး မလုပ်ခဲ့ဘူး လုိ့ တောင် ပြောလုိ့ ရနိုင် ပါတယ် ။
တစ်ဦးချင်း အကောင်းဆုံး ဆု မှာလည်း ဗန်ဒိုက် က ပရီးမီးယားလိဂ် တစ်နှစ်တာ အကောင်းဆုံး ဆု ရခဲ့ သလို မက်ဆီလည်း လာလီဂါ အကောင်းဆုံး ဆု ရခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် သူတို့ ၂ ဦး ထိပ်တိုက်တွေ့ တဲ့ ပွဲ ကို ကြည့်ပြီး ပဲ ဘယ်သူက ပိုသာ တယ်ဆိုတာ ကို ဆုံးဖြတ် ရတော့ မှာပါ ။
ဟုတ် ပါတယ် . . . ချန်ပီယံ လိဂ် ဆီမီး ဖိုင်နယ် ပါ ။ ပထမ အကျော့ မှာ မက်ဆီ က ဗန်ဒိုက် ဦးဆောင် တဲ့ လီဗာပူး ခံစစ် ကို ကျော်ဖြတ်ပြီး ဘာစီလိုနာ အတွက် ၂ ဂိုး သွင်းပေး ခဲ့ ပါတယ် ။ ပထမဂိုး က အသင်းဖော် ရဲ့ ပါဝင် ပတ်သက်မှု ရှိခဲ့တယ် ဆိုရင်တောင် ဒုတိယဂိုး ဖြစ်တဲ့ ဖရီးကစ် ကတော့ မက်ဆီ ရဲ့ တစ်ကိုယ်တော် အရည် အသွေး သီးသန့် ဆိုတာ ဘယ်သူမှ ငြင်းနိုင် မှာ မဟုတ်ပါဘူး ။
ဒုတိယ အကျော့ မှာတော့ ဗန်ဒိုက် ရဲ့ လီဗာပူး က မက်ဆီ ပါတဲ့ ဘာစီလိုနာ ကို ၄ ဂိုးပြတ် သွင်းပြီး ဖိုင်နယ် တက်သွားခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဒီပွဲ မှာ ဗန်ဒိုက် ထက် ပိုပြီး ခြေစွမ်း ပြခဲ့တဲ့ လီဗာပူး ကစား သမားတွေ အများကြီး ရှိခဲ့ ပါတယ် ။ ဘာစီလိုနာ တိုက်စစ် ကို ဗန်ဒိုက် တားဆီး ခဲ့တယ် ဆိုတာ ထက် ဂိုး သမား အဲလစ်ဆွန် ဘက်ကာ လက်စွမ်း ပြခဲ့တယ် ဆိုတာက ပိုပြီး မှန်ခဲ့ မှာပါ ။ နောက်ပြီး လီဗာပူး ရဲ့ သွင်းဂိုး ၄ ဂိုး စလုံး မှာ ဗန်ဒိုက် ပါဝင် ပတ်သက်ခြင်း မရှိခဲ့ ပါဘူး ။
ဒါကြောင့် ထိပ်တိုက် တွေ့ဆုံမှု အရ ဆုံးဖြတ်မယ် ဆိုရင်တော့ မက်ဆီ က ဗန်ဒိုက် ထက် နှာတစ်ဖျား အသာ ရသွား တယ် လို့ ပြောရမှာပါပဲ ။ ဒါဆိုရင် ဘာဖြစ်လို့ ငြင်းခုန်မှုတွေ ဖြစ်နေရတာလဲ . . . အဖြေက တော့ လီဗာပူး က ဖိုင်နယ် တက်သွားခဲ့တာ ကြောင့်ပါ ။ ဖိုင်နယ် တက်သွားရုံ မက ဗိုလ်ပါ စွဲသွားခဲ့တာ က မက်ဆီ ရဲ့ အကောင်းဆုံး ဆု အိပ်မက်တွေ ကို အဟန့် အတား ဖြစ်လာ စေခဲ့ ပါတယ် ။
နောက်ထပ် တစ်ချက်က မက်ဆီ ရဲ့ နိုင်ငံ အသင်း ဘက်က အောင်မြင်မှု မရခဲ့တာ နဲ့ ကိုပါ ဒယ်ရေး ဖိုင်နယ် မှာ ရှုံးခဲ့ရတာပါ ။ တကယ်လို့ ဘာစီလိုနာ သာ ကိုပါ ဒယ်ရေး ဖိုင်နယ် မှာ နိုင်ခဲ့ပြီး မက်ဆီ ခြေစွမ်းပြ နိုင်ခဲ့ မယ် ဆိုရင် အခုလို အငြင်းအခုန်တွေ သိပ်ဖြစ် စရာ မရှိပါဘူး ။ အခု ကတော့ မက်ဆီ ရော ဗန်ဒိုက် မှာပါ ကိုယ်စီ အားသာချက် တွေ ရှိနေတာ ကြောင့် ဒီလောက် ငြင်းခုန် ဖို့ ဖြစ်လာ ခဲ့ရတာပါ ။
လီဗာပူး ရဲ့ ချန်ပီယံ လိဂ် အောင်ပွဲ ကြောင့်ပဲ မက်ဆီ ဟာ UEFA Player of the Year ဆုကို လက်လွှတ် ခဲ့ရ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဖီဖာ ရဲ့ ဆုပေးပွဲ မှာ တော့ အောင်ပွဲ ဆင်နိုင် ခဲ့ပြီး လာမယ့် ရွှေဘောလုံး ဆု ( Ballon D’or ) အတွက် ဗန်ဒိုက် နဲ့ မက်ဆီ တုိ့ အကျိတ် အနယ် ဖြစ်လာခဲ့ ရပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။
ရွှေဘောလုံး ကို မက်ဆီ ရနိုင် မလား ဆိုတာကတော့ ပြောဖို့ စောနေ ပါသေးတယ် ။ ဒီနှစ် မှာ လီဗာပူး က တော်တော်လေး ပုံစံ ကောင်း ရနေပြီး မက်ဆီ ရဲ့ ဘာစီလိုနာ ကတော့ အခြေအနေ ဆိုးနေ ခဲ့ ပါတယ် ။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် မက်ဆီ အတွက်တော့ မနှစ်က ရိုနယ်ဒို လို အဖြစ်ဆိုးမျိုး နဲ့ ကြုံရမယ့် အရေး ကနေ လွဲချော် သွားခဲ့ရ ပါပြီ . . .
လီယှနျနယျ မကျဆီ ဟာ အကောငျးဆုံး ဆုနဲ့ ထိုကျတနျခဲ့ရဲ့လား . . .
ဖီဖာ ရဲ့ တဈနှဈတာ အကောငျးဆုံး ဆုပေး ပှဲ အခမျး အနား ကတော့ ယမနျနေ့ က ပွုလုပျ ပွီးစီး သှားခဲ့ ပါပွီ ။ အကောငျးဆုံး သှငျးဂိုး ဆု ၊ နညျးပွ ဆု ၊ အမြိုး သမီး ကစား သမား ဆုတှေ ကို ပေးအပျ အပွီး မှာတော့ အားလုံး စိတျဝငျ စား ကွတဲ့ အကောငျးဆုံး အမြိုးသား ကစား သမား ဆု ကို ရောကျလာ ခဲ့ ပါတယျ ။ ဆုပေေး ပှဲ မတိုငျခငျ မှာ လီဗာပူး ခံစဈမှုး ဗနျဒိုကျ က ရပေနျးစား ခဲ့ ပမေယျ့ တကယျတနျး ကွငွောခြိနျ မှာတော့ ဒုတိယ ရပေနျး အစားဆုံး ဖွဈတဲ့ ဘာစီလိုနာ တိုကျစဈမှုး မကျဆီ က ဆှတျခူး ရရှိသှားခဲ့ ပါတယျ ။
မဲ ရလဒျ တှေ ကို ထုတျပွနျခြိနျ မှာတော့ မကျဆီ ဟာ ဗနျဒိုကျ ကို ၈ မှတျ အသာ နဲ့ ကြျောဖွတျ နိုငျခဲ့တာ ဖွဈပွီး အာဂငျြတိုငျးသား အတှကျ ပထမဆုံး FIFA The Best Award ဖွဈစေ ခဲ့ ပါတယျ ။ ဆုပေးပှဲ အပွီး မှာတော့ ဒီဆု ကို မကျဆီ ရသငျ့တယျ ၊ ဗနျဒိုကျ ရသငျ့တယျ ဆိုတဲ့ သုံးသပျမှု တှေ အသီးသီး ပျေါထှကျ လာခဲ့ ပါတော့ တယျ ။
ဒီ ဆု ကို မကျဆီ တကယျပဲ ရသငျ့ သလား . . . ။ စာရေးသူ အမွငျ ကို ပွောရရငျတော့ ရသငျ့တယျ လို့ ပွောနိုငျ သလို မရသငျ့ဘူး လို့လညျး ပွောလို့ ရနေ ပွနျပါတယျ ။ တဈဖကျဖကျ ကို မဖွဈမနေ ရှေးပါ ဆိုရငျတော့ ရသငျ့တယျ လို့ပဲ ဆိုရမှာပါ ။
ဒါတှကေို ငွငျးခုနျဖို့ အတှကျ ပွီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံး ရာသီ ကို ပွနျသှား ကွရအောငျ . . . ။ မကျဆီ ဟာ မနှဈ က ဘောလုံး ရာသီ တဈလြောကျ လုံး စပိနျ လာလီဂါ မှာ ရော ဥရောပ ခနျြပီယံ လိဂျ မှာပါ ခွစှေမျးပွ နိုငျ ခဲ့ ပါတယျ ။ ခနျြပီယံ လိဂျ မှာ ဆိုရငျ အပတျစဉျ အကောငျးဆုံး ကစား သမား ဆုကို မကျဆီ ၊ မကျဆီ ၊ မကျဆီ ၊ မကျဆီ ကပဲ ရခဲ့တာပါ ။ မကျဆီ ခွမေပျေါ ခဲ့တာက တဈပှဲ သာ ရှိခဲ့ပွီး အဲ့ဒီ တဈပှဲ က ပဲ မကျဆီ ကို ရော ဘာစီလိုနာ ကို ပါ ပေးဆပျမှု ကွီးမား စခေဲ့ တာပါ ။
အသငျး လိုကျ အောငျမွငျမှု မှာတော့ မကျဆီ ရဲ့ လာလီဂါ ခနျြပီယံ ဆု ဟာ ဗနျဒိုကျ ရဲ့ ခနျြပီယံ လိဂျ ကို မယှဉျ နိုငျ ပါဘူး ။ နိုငျငံ အသငျး ဘကျကို ပွနျကွညျ့ရငျ လညျး မကျဆီ ဟာ ကိုပါ အမရေိက မှာ ရှုံးထှကျ အဆငျ့ ကို သာ ရောကျခဲ့ ပွီး ဗနျဒိုကျ ကတော့ ဥရောပ နေးရှငျးလိဂျ မှာ ဒုတိယ ရခဲ့ ပါတယျ ။ ကိုပါ မှာ ဗိုလျစှဲ ခဲ့တဲ့ ခနျြပီယံ လိဂျ ခနျြပီယံ လီဗာပူး အသငျးသား တှေ လညျး ရှိနေ ပွနျပါတယျ ။ ဒါကွောငျ့ အသငျးလိုကျ အောငျမွငျမှု မှာတော့ မကျဆီ က ပွိုငျဘကျ တှေ ထကျ အမှတျ နညျးနခေဲ့ ပါတယျ ။
တဈဦးခငျြး အရညျ အသှေး ကို နှိုငျးယှဉျ တဲ့ အခါ မှာလညျး မကျဆီ ဟာ ဗနျဒိုကျ နဲ့ သူမသာ ကိုယျမသာ အနေ အထား မှာသာ ရှိခဲ့ ပါတယျ ။ မကျဆီ က ရှဖေိနပျတှေ အမြားကွီး ယူထားတယျ ဆိုပမေယျ့ ဒါဟာ ရိုနယျဒို ၊ မာနေး ၊ ဆာလာ တို့ လို တိကျစဈ သမားတှေ အပျေါ မှာသာ အားသာခကျြ ဖွဈစနေိုငျ ပါတယျ ။
ဗနျဒိုကျ ကတော့ ခံစဈ သမား တဈယောကျ ဖွဈနတော ကွောငျ့ မကျဆီ ရဲ့ သှငျးဂိုးတှေ က ဗနျဒိုကျ အပျေါ အသာ ရနိုငျ မှာ မဟုတျပါဘူး ။ ဗနျဒိုကျ ဟာ မကျဆီ လို ဂိုးတှေ မသှငျးနိုငျ ခဲ့သလို မကျဆီ က လညျး ဗနျဒိုကျ လို ခံစဈ ကွောငျး ကို ဦးဆောငျ ပေးနိုငျတာမြိုး မလုပျ နိုငျခဲ့ ပါဘူး ။ စကားကို ကပျပွီး ပွောကွကွေး ဆိုရငျ ဗနျဒိုကျ ကတောငျ ရှတေ့ကျ ဂိုးသှငျး ပေးခဲ့ပွီး မကျဆီက နောကျတနျး ကို ဆငျးဖကျြတာမြိုး မလုပျခဲ့ဘူး လို့ တောငျ ပွောလို့ ရနိုငျ ပါတယျ ။
တဈဦးခငျြး အကောငျးဆုံး ဆု မှာလညျး ဗနျဒိုကျ က ပရီးမီးယားလိဂျ တဈနှဈတာ အကောငျးဆုံး ဆု ရခဲ့ သလို မကျဆီလညျး လာလီဂါ အကောငျးဆုံး ဆု ရခဲ့ ပါတယျ ။ ဒါကွောငျ့ သူတို့ ၂ ဦး ထိပျတိုကျတှေ့ တဲ့ ပှဲ ကို ကွညျ့ပွီး ပဲ ဘယျသူက ပိုသာ တယျဆိုတာ ကို ဆုံးဖွတျ ရတော့ မှာပါ ။
ဟုတျ ပါတယျ . . . ခနျြပီယံ လိဂျ ဆီမီး ဖိုငျနယျ ပါ ။ ပထမ အကြော့ မှာ မကျဆီ က ဗနျဒိုကျ ဦးဆောငျ တဲ့ လီဗာပူး ခံစဈ ကို ကြျောဖွတျပွီး ဘာစီလိုနာ အတှကျ ၂ ဂိုး သှငျးပေး ခဲ့ ပါတယျ ။ ပထမဂိုး က အသငျးဖျော ရဲ့ ပါဝငျ ပတျသကျမှု ရှိခဲ့တယျ ဆိုရငျတောငျ ဒုတိယဂိုး ဖွဈတဲ့ ဖရီးကဈ ကတော့ မကျဆီ ရဲ့ တဈကိုယျတျော အရညျ အသှေး သီးသနျ့ ဆိုတာ ဘယျသူမှ ငွငျးနိုငျ မှာ မဟုတျပါဘူး ။
ဒုတိယ အကြော့ မှာတော့ ဗနျဒိုကျ ရဲ့ လီဗာပူး က မကျဆီ ပါတဲ့ ဘာစီလိုနာ ကို ၄ ဂိုးပွတျ သှငျးပွီး ဖိုငျနယျ တကျသှားခဲ့ ပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ ဒီပှဲ မှာ ဗနျဒိုကျ ထကျ ပိုပွီး ခွစှေမျး ပွခဲ့တဲ့ လီဗာပူး ကစား သမားတှေ အမြားကွီး ရှိခဲ့ ပါတယျ ။ ဘာစီလိုနာ တိုကျစဈ ကို ဗနျဒိုကျ တားဆီး ခဲ့တယျ ဆိုတာ ထကျ ဂိုး သမား အဲလဈဆှနျ ဘကျကာ လကျစှမျး ပွခဲ့တယျ ဆိုတာက ပိုပွီး မှနျခဲ့ မှာပါ ။ နောကျပွီး လီဗာပူး ရဲ့ သှငျးဂိုး ၄ ဂိုး စလုံး မှာ ဗနျဒိုကျ ပါဝငျ ပတျသကျခွငျး မရှိခဲ့ ပါဘူး ။
ဒါကွောငျ့ ထိပျတိုကျ တှဆေုံ့မှု အရ ဆုံးဖွတျမယျ ဆိုရငျတော့ မကျဆီ က ဗနျဒိုကျ ထကျ နှာတဈဖြား အသာ ရသှား တယျ လို့ ပွောရမှာပါပဲ ။ ဒါဆိုရငျ ဘာဖွဈလို့ ငွငျးခုနျမှုတှေ ဖွဈနရေတာလဲ . . . အဖွကေ တော့ လီဗာပူး က ဖိုငျနယျ တကျသှားခဲ့တာ ကွောငျ့ပါ ။ ဖိုငျနယျ တကျသှားရုံ မက ဗိုလျပါ စှဲသှားခဲ့တာ က မကျဆီ ရဲ့ အကောငျးဆုံး ဆု အိပျမကျတှေ ကို အဟနျ့ အတား ဖွဈလာ စခေဲ့ ပါတယျ ။
နောကျထပျ တဈခကျြက မကျဆီ ရဲ့ နိုငျငံ အသငျး ဘကျက အောငျမွငျမှု မရခဲ့တာ နဲ့ ကိုပါ ဒယျရေး ဖိုငျနယျ မှာ ရှုံးခဲ့ရတာပါ ။ တကယျလို့ ဘာစီလိုနာ သာ ကိုပါ ဒယျရေး ဖိုငျနယျ မှာ နိုငျခဲ့ပွီး မကျဆီ ခွစှေမျးပွ နိုငျခဲ့ မယျ ဆိုရငျ အခုလို အငွငျးအခုနျတှေ သိပျဖွဈ စရာ မရှိပါဘူး ။ အခု ကတော့ မကျဆီ ရော ဗနျဒိုကျ မှာပါ ကိုယျစီ အားသာခကျြ တှေ ရှိနတော ကွောငျ့ ဒီလောကျ ငွငျးခုနျ ဖို့ ဖွဈလာ ခဲ့ရတာပါ ။
လီဗာပူး ရဲ့ ခနျြပီယံ လိဂျ အောငျပှဲ ကွောငျ့ပဲ မကျဆီ ဟာ UEFA Player of the Year ဆုကို လကျလှတျ ခဲ့ရ ပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ ဖီဖာ ရဲ့ ဆုပေးပှဲ မှာ တော့ အောငျပှဲ ဆငျနိုငျ ခဲ့ပွီး လာမယျ့ ရှဘေောလုံး ဆု ( Ballon D’or ) အတှကျ ဗနျဒိုကျ နဲ့ မကျဆီ တို့ အကြိတျ အနယျ ဖွဈလာခဲ့ ရပွီ ဖွဈပါတယျ ။
ရှဘေောလုံး ကို မကျဆီ ရနိုငျ မလား ဆိုတာကတော့ ပွောဖို့ စောနေ ပါသေးတယျ ။ ဒီနှဈ မှာ လီဗာပူး က တျောတျောလေး ပုံစံ ကောငျး ရနပွေီး မကျဆီ ရဲ့ ဘာစီလိုနာ ကတော့ အခွအေနေ ဆိုးနေ ခဲ့ ပါတယျ ။ ဘာပဲ ဖွဈဖွဈ မကျဆီ အတှကျတော့ မနှဈက ရိုနယျဒို လို အဖွဈဆိုးမြိုး နဲ့ ကွုံရမယျ့ အရေး ကနေ လှဲခြျော သှားခဲ့ရ ပါပွီ . . .